Ny mouvance Zafy dia tsy manaiky intsony an’ i Andry ho filoha – MyDago.com aime Madagascar
Toy ny isanandro dia tafavory teo amin’ny kianjan’ny Magro ny vahoaka ,maro araka izany ireo nifandimby naneho ny heviny :
Anisan’ireo nikabary teto àry Ignace fa vorona ve i Andry,hoy izy,no flesy sy basim-borona no hamonona azy ? Mafana indray ny toe-draharaha eto Madagasikara ary antomotra nyLuanda. Ny mahagaga koa,hoy ihany ity solon-tenan’I Moramanga ity,fa rehefa akaiky fivoarina dia mody mandalo eto i Simao ary milaza angano.Tsy ilain’ny ankolafy 3 ny mihaona amin’iSimao.
Mbola nanamafy izany ihany koa ny Mpitari-tolona Manoela ka nambarany fa tsy mila miresaka amin’iSimao ny ankolafy 3 ary takina ny hisian’ny force éxécutoire amin’ny hevitra tapaka avy anyLuanda.
Nitodika manokana tamin’ireo mpiasan’ny douanes koa izy teto ka hoy izy hoe:”Aza manaiky mihitsy ianareo douanes sady efa ampian’ny fonctionnaires ka dia akatony fa manadala”.
Tabera indray kosa dia nilaza fa tsy maintsy tetezina ny faritra satria manakaiky ilay andro ary kasaina 250 isaka ny distrika na kaomina no ho avy hitsena ny filoha Ravalomanana. Tsy miova amin’ny tapaka tany Sandton ny ho tapaka any ,hoy izy,fa ny fitazonana an’i Andry ho filoha no dinika izao.
Efa hatramin’ny 26 jona i Simao no tsy iraky ny Sadc nakaty,raha ny voalazany,fa ny frantsay hatrany no niantso azy. Raha iraka izy dia nihaona tamin’ny profesora Zafy Albert. Aza gaga ianareo raha ho avy any amin’iSimao izahay mouvance Zafy rahampitso,hoy ihany izy. Nanoratra ho an’i Simao ny profesora androany ka haka ny valiny izahay rahampitso. Tsotra ny ao anatin’io taratasy io, izahay mouvance Zafy dia tsy manaiky intsony any i Andry ho filoha satria sady mpanongam-panjakana izy no nambotry firenena, nangalatra ary namono olona. Ary miara miombon-kevitra amin’io ny ankolafy 2 hafa,hoy izy. Tsy maintsy matoky ireo filoha 3 ireo isika ary efa samy nanao ny andraikiny izy ireo.Filaharambe eran’i Madagasikara amin’ity faran’ny herinandro ity ary fihomanana io.
Nolazainy ihany koa teto fa emissaire I Simao fa tsy médiateur ary tsy tafiditra amin’ny toerana fivoriana akory rehefa any ivelany;mitovy amin’nybasim-borona i Andry sy i Simao, tsy ilaina! Nampitandrina ihany koa izy teto fa ho avy eto amin’nymagro i Ambohitsirohitra, hilaza fa ny mpitarika efa hafahafa, efa nandray vola…
Anisan’ny nandray fitenenana teto ihany koa ny solombavam-bahoaka Henri ka nilaza izy fa mbola tsy fotoana ny handehanana any Imerikasinina hoy Dada. Tsy zazakely na baolina ping isika vao antsoina diatonga ary tsy nisy taratasy ofisialy fa ny ambasadoaro frantsay no nampiantso.Efa mazava fa mpanongam-panjakana i Andry,hoy izy, ary isika tsy hiantso ny CI fa ny hamaroantsika sisa no ilaina. Tsy mila misahotaka tahaka ny andry zareo isika hoy i Dada,rah any tatitra nataony,fa atao am-pitiavana sy entina am-bavaka ny tolona.
Hoy kosa i Pst Mamitiana namarana ny fandraisana fitenenana izy : amin’ny Zoma isika manadio tanàna satria andro lehibe ny asabotsy ary antsoina daholo hiara-hanadio satria betsaka no mody lavitra ka amin’ny 2 ora sy sasany dia manomboka ny hetsika amin’io Sabotsy io.
Tabera : 90%n’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no efa manaiky fa tsy ilaina intsony i Andry Rajoelina
Tsy manaiky didy jadona ary tsy manaiky resy tsy miady !
Auteur Solo Razafy*Publié le 17 août 2011 18 août 2011 Catégories Politique
3 réflexions sur « Ny mouvance Zafy dia tsy manaiky intsony an’ i Andry ho filoha »
18 août 2011 à 15 h 03 min
MANFDEHANA MIDINA AN-DALAM-BE FA AZA LANIANA ANDRO ZAHAY
18 août 2011 à 15 h 19 min
Ho filohan’ny inona ?iza koa anefa no hanaiky izany eo? ity firesadresahana lava,mba olombelona ve
no mba ho resahana eo?olona efa maty heritreritra ve no hantenaina ho resahana ?mba mahazendana
ihan! hatao foana ny handefitra fa vao maika izay no hanitsahan’ireto foza ireto antsika,ka mba aoka koa izay izany
dinika lava mandany andro sy fotoana fotsiny.
un tantinet trop tard…
…trop d’atermoiements au début !!!!!!
Précédent Article précédent : Tanora TIM : Voin-kava mahatratra !
Suivant Article suivant : Quelle « normalité »… faute d’argent ?